Otu esi etinye MATE Desktop 1.26 na Fedora 35 - LinuxCapable
October 20, 2021 October 15, 2021 by Jọshụa James
Otu esi ewepu (wepụ) Desktop MATE
Maka ndị na-amaghị MATE Desktop Environment, ọ bụ n'ihu nke GNOME 2. A ma ama maka ịdị arọ, ngwa ngwa, na kwụsie ike nke na-agba ọsọ na Linux na ọtụtụ BSD sistemụ arụmọrụ. MATE bụkwa nhọrọ magburu onwe ya maka sistemụ dị ala ma ọ bụ ndị na-achọ ịnọgide na-arụ ọrụ nke ọma na akụrụngwa sistemụ. Ụdị Desktọpụ MATE Kacha ọhụrụ gụnyere nkwado Wayland maka ọtụtụ ngwa desktọpụ na ngwa.
Fedora 35 etinyere na ndabara GNOME 41. Ọ bụ ezie na nke a bụ nhọrọ magburu onwe ya, enwere ike ịwụnye ihe ndị ọzọ na gburugburu desktọọpụ ndabara, ma ị nwere ike gbanwee n'etiti ha kpamkpam.
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta Otu esi etinye MATE Desktop 1.26 kwụsiri ike na Fedora 35.
Ka ịtọlite ​​akaụntụ sudo dị adị ma ọ bụ ọhụrụ, gaa na nkuzi anyị na Otu esi etinye onye ọrụ na Sudoers na Fedora.
Site na ndabara, gburugburu MATE Desktop dị na ebe nchekwa ndabere Fedora na-emelite ya ka ọ bụrụ ntọhapụ kachasị ọhụrụ enyere Fedora n'ime ọnwa isii ntụgharị OS. Ugbu a, n'oge nkuzi a, MATE 1.26 bụ ụdị dị maka Fedora 35.
Iji tinye MATE, mepee ọnụ ọnụ gị wee wụnye gburugburu desktọpụ.
Rịba ama na nwụnye bụ 1.3G, yabụ ọ nwere ike were obere oge ibudata dabere na njikọ ịntanetị gị.
N'aka nke ọzọ, ị nwekwara ike ịwụnye ngwa desktọpụ MATE maka a "Na" ndozi.
Ozugbo nrụnye mechara, ị ga-achọ ịmalitegharị sistemụ gị. Ebe ị nọla na njedebe, pịnye iwu a.
Ozugbo ịmaliteghachiri sistemụ gị, ị ga-ebu ụzọ laghachi azụ na ihuenyo nbanye nke ndabara.
Abanyela ozugbo. Pịa gburugburu cog dị n'akụkụ aka nri ala, nke a ga-ekpughe nhọrọ ọhụrụ nke gburugburu desktọpụ ma ọ bụ ndị njikwa ngosi. Site na ndabara, ekwesịrị ịhọrọ MATE na-akpaghị aka, mana mgbe ụfọdụ ị nwere ike ịgbanwe ya site na GNOME ka ọ bụrụ MATE.
Dị ka n'elu, a na-ahọrọ gburugburu desktọọpụ MATE. A ga-edozi nke a na-akpaghị aka na nbanye ọzọ iji gbanwee azụ na GNOME 41. Naanị mee otu usoro ahụ mana na ntụgharị dịka nhọrọ ikpeazụ ga-echekwa na-akpaghị aka ma cheta mgbe ị na-agbanwe. N'ụzọ dị otú a, ị nwere ike nweta ihe kacha mma nke ụwa abụọ (desktọpụ).
Mara, ị ga-ahụ ngwa MATE arụnyere na GNOME, mana nke a dị mma, a ga-eji nkwalite dnf ọkọlọtọ na iwu nkwalite kwalite ha.
Dị ka mmepụta dị n'elu gosipụtara, ị tinyela MATE 1.26 nke ọma na sistemụ Fedora 35 gị.
Maka mmelite n'ọdịnihu maka desktọọpụ MATE na ngwungwu sistemụ Fedora 35, gbasoo iwu dnf ọkọlọtọ.
Iwepụ gburugburu Desktọpụ nwere ike ịdị aghụghọ, ọ dabara na MATE na Fedora, ọ dị ọcha karịa ụfọdụ mkpokọta desktọpụ na nkesa ndị ọzọ.
Iji wepu MATE DESKTOP.
Ozugbo emechara, wepụ ngwa MATE niile.
Na nzọụkwụ ọzọ, ị ga-malitegharịa ekwentị gị. Mgbe ị nọ na ọdụ, pịnye iwu a.
Mgbe ịlaghachi na ihuenyo nbanye, ọ bụrụ na ahọpụtabeghị GNOME, jiri aka họrọ ya ọzọ, ị ga-alaghachi na GNOME 41 ndabara na ngwa.
Ozugbo ị nwere obi ụtọ na ihe niile na-arụ ọrụ, ị nwere ike ihicha ma kpochapụ ngwugwu ndị na-adịghị eji iwu a.
N'ime nkuzi a, ị mụtala nke ọma ka esi etinye MATE Desktop Environment na Fedora 35. N'ozuzu, MATE bụ nnukwu ọrụ obodo maka ndị na-achọ ka kwụsie ike ma dị mma maka ndị chọrọ ihe kachasị na desktọọpụ ha, laptọọpụ, na netbooks. ma họrọ ihe atụ desktọpụ ọdịnala.
Categories Fedora Tags gburugburu Desktọpụ, Fedora 35 Mail igodo